ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Aug 28, 2012 in Creative Writing | 34 comments
မိုးပြာအခန်းဆက် ကြီးကို ဖတ်မိပြီး သကာလ ကျွန်ုပ် ဆြာအုပ်သည်ကား တော်တော်လေးကို မခံချိမခံသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. နားလည်လို့တော့မဟုတ် ဘာတွေမှန်းကိမသိရလောက်အောင် နလပိန်းတုံးနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီတော့ရှာရသည်ပေါ့ဗျာ.. မိုးပြာအခန်းဆက် မှာ တွေ့ရတဲ့ comment တွေကလဲ တိတိပပ ချေပထားတာ မတွေ့ရတဲ့ အပြင်း အမြဲလက်ဇောင်းထက်နေတဲ့ ရွားသူ/သား တွေတောင် လက်ရှောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..ဒီတော့ မိုးပြာဆို တာဘာလဲ ဆိုတာကို အရင်ကြည့်ရအောင်..
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ကူးယူဖော်ပြထားတာ ဆိုပေမယ့် copy paste category ထဲကိုထည့်ထားရင် နောက်ကိုရောက်သွားတယ် ဆိုတာကြောင့် Creative Writing ထဲကိုထည့်သွင်းထားပါကြောင်း..
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းချုပ် ဓမ္မ၀ိဟာရီ ဦးဥာဏ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
အမည် – ဓမ္မ၀ိဟာရီ ဦးဥာဏ
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်အမှတ် – ၁၂/ဥကမ (နိုင်) ၁၈၂၀၀၀
မိဘအမည် – ဦးမြဒင် + ဒေါ်လှထွန်း
မွေးရာဇာတိ – ဂေါင်းကွဲကျေးရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မကွေးတိုင်း။
လူမျိုး – မြန်မာ
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ
အလုပ်အကိုင် – ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဆည်းကပ်လေ့လာကြသူများအား ဆုံးမသြ၀ါဒပေးခြင်း။
နေရပ်လိပ်စာ – (၁) အမှတ် ၂၀၊ မိုးပြာခြံ၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ မြဥယျာဉ်၊ (ဌ} ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်(၂) အနုပါဒါယဉ်ကျေးမှုတရားဌာန၊ မိုးပြာခြံ၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေ၊ ကျီကုန်းစု၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း။
ပညာသင်ရာဌာန – ဂေါင်းကွဲရွာတောင်ကျောင်း။
ကိုရင်ဝတ်သည့်နှစ် – ၁၃၁၄ ခုနှစ်
ကိုရင်ဝတ်ရာဌာန – ဂေါင်းကွဲရွာတောင်ကျောင်း၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပခုက္ကူခရိုင်။
ကိုရင်ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော် – ဆရာတော် ဦးပညာ
ရဟန်းခံသည့်နှစ် – ၁၃၁၉ ခုနှစ်
ရဟန်းဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော် – ဆရာတော် ဦးပညာ
ပိဋကတ်စာပေသင်ယူရာဌာန – မစိုးရိမ်တိုက်၊ ဂန္ထဓူရကျောင်း။
ငယ်၊ လတ်၊ ကြီးအောင်ဌာန – မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်
စာချတန်းစာဝါလိုက်ဌာန – မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်၊ ဒေးဝန်းကျောင်း (စာချတန်းမပြီးပါ)
သင်ကြားပေးသည့် ဆရာတော်များ – မစိုးရိမ်တိုက်နှင့် မိုးကောင်းတိုက် ဆရာတော်များ၊ တောင်သမန်တိုက်ဆရာတော်များ။
စာသင်နှစ် – အသက် ၂၅ နှစ်၊ ၅ ၀ါထိ။
တာကျောင်းထွက်နေသည့်နှစ် – အသက် ၂၅ နှစ်မှအထက်။
တာကျောင်းနေရာဌာန – ရှင်မတောင်ရွာတောကျောင်းနှင့်မင်းကွန်းစံတော်မူတောင်နှင့် ရွှေမြင်တင်တောင်၊ (အရှေ့ရိုးမ အခြေ)၊ ငွေတောင်နှင့် မိုးပေါက်ကျချောင်။
လက်ရှိနေရာ၌စတင်နေသည့်နှစ် – ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ယနေ့အထိ။
ဘာသာပြောင်းသည့်နှစ် – ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ည ၁၀ နာရီ၊ မိနစ် ၃၀။
ဘာသာပြောင်းရသည့်အကြောင်း – ထေရ၀ါဒ၌နေစဉ် ထေရ၀ါဒ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ရှေးဘ၀၊ ခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ အယူများသည် ဘုရားဟောနှင့်မညီ၊ ဘုရားရှင်မယူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများဖြစ်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယကထံသို့တင်ပြ၍ တရားစွဲသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေး ဦးစီးမှူးက စတုတ္ထပါရာဇိကဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲခဲ့ပြီး ဗဟိုဝိနိစ္ဆယထိ တရားရှုံးသောကြောင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရဟန်းအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ရသည်။ မိုးပြာဂိုဏ်းထောင်၍ ဆည်းကပ် သူများအား ဆုံးမလမ်းညွှန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းကွန်းတောင်ရိုးတွင် တရားကျင့်ကြံရာမှ မိမိကိုယ်ကို ရဟန္တာဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ သံဃာ့ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့က ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ မြို့နယ်ဝိနည်းဓိုရ်၊ တိုင်းဝိနည်းဓိုရ်၊ နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဓိုရ် အဆင့်သုံးဆင့်စလုံးတွင် ရှုံးနိမ့်သည့်အတွက် ဦးဥာဏကို လူဝတ်လဲစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၀ိနည်းဓမ္မကံ (၉-၁၁) တို့ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး ၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တိုင်အောင် ထောင်သုံးနှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။ ၀ိနည်းဓမ္မကံ (၉-၁၁) အရ တရားစွဲခံရသော်လည်း မင်းကွန်း တိပိဋကဆရာတော်ဘုရား ၏ မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် ထောင်သုံးနှစ်သာ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထောင်မှလွတ်သောအခါ မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေကို အခြေပြုလျက် မိုးပြာခြံကိုတည်ထောင်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ဖြင့် သာသနာပ၀ါဒများကို ဖြန့်ချိဟောကြားခဲ့သည်။ ဓမ္မပါမောက္ခ၀တ်စုံဟု အမည်ပေးကာ မိုးပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီအပွတို့ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့သည်။ အနုပါဒါယဉ်ကျေးမှုဌာနဟူ၍ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒအယူအဆများကို စာပေး၊ စာယူပုံစံဖြင့် သင်ကြား ပို့ချခဲ့သည်။
၁၉၉၁ခုနှစ်တွင်ထေရ၀ါဒသာသနာတော်အတွင်းမှသံဃာဂိုဏ်းသီးသန့်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရသည်။ ထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ကျခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် လျှော့ရက်များဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းအယူဝါဒများကို ဆက် လက်ဟောပြောခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ ခြံအမှတ် ၂၀ ကို ဌာနချုပ်ပြုလုပ်လျက် ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မ၀ါဒ (အဓမ္မ၀ါဒ) အယူများကို ပို့ချခဲ့သည်။ လိုအပ်လျှင် အိမ်တိုင်ရာရောက်ပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးမှုပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုပုံစံဖြင့် လည်းကောင်း လိုက်လံစည်းရုံးဟောပြောလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုးပြာဂိုဏ်းမှ တရားမ၀င် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားသည့် စာအုပ်ပေါင်းမှာ ၆၀ ကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှ အချို့မှာ –
၈။ ဘာသာတရားကပေးသော ဆုလာဘ်(စာမျက်နှာ ၄၆၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်။ အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်)၊
၁၉။ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒဿစာစဉ်-၁ (စာမျက်နှာ ၇၀၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၆၄၊ သက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှ သမ္မာဒိဋ္ဌိသို့-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိ-ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ လောကအမြင်မိတ်ဆက် – သုံးမျိုးစု)၊
၂၀။ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒဿန စာစဉ်-၂ (စာမျက်နှာ ၇၁၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက မယူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ- ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်-ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀- ဦးနှောက်၏ ချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်မှုများ – လေးမျိုးစု)၊
၃၁။ လူသားလျှောက်ရမည့်လမ်း (စာမျက်နှာ ၆၀)၊
၃၂။ လူသားမှန်သမျှ ကျင့်ပွားဖွယ်ရာ ပုညကြိယာဝတ္ထုဆယ်ဖြာ (စာမျက်နှာ ၁၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၃၄။ ဓမ္မ၀ိဟာရီသို့ ဦးခိုက်ခြင်း (စာမျက်နှာ ၁၆)၊
ဂေဇက်မှာ မိုးပြာရဲ့ ဘာသာရေးဝါဒဖြန့် post တွေတွေ့နေရတာ နဲနဲလေးမှ စိတ်မချမ်းသာပါ.. ကို KyawThein ရေးတဲ့ မိုးပြာပြာသို့ မေတ္တာစာ post က nature ရဲ့ comment ဖြစ်တဲ့ ”သူတို့က မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကို သေသေချာချာလေ့လာပြီး အားနည်းမယ်ထင်ရတဲ့နေရာတွေ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ် တတ်တဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်လိုရာဆွဲယူပြီး တရားတော်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီး သူတို့ရဲ့တရားတွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။ ” တဲ့ ဟုတ်ပါတယ်.. သူတို့ဟာ မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကို သေသေချာချာလေ့လာပြီး မှ ၀ါဒဖြန့်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လို့ ဘာသာရေးကို စာအုပ်ထဲမှာဘဲ ထားတဲ့သူတွေ အတွက် ပြန်လည် ချေပနိုင်ခြင်း အားနည်းနေပါတယ်။ ဒါကို က သူတို့ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ဖို့ အတွက် အကွက်ကောင်း ဖြစ်နေတာမို့လို့ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င်များ အနေနဲ့ မိမိဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အလေးထား ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်းရင်း…
ဗုဒ္ဒသာသနံ စီရံတိဋ္ဌတု..ဗုဒ္ဒသာသနံ စီရံတိဋ္ဌတု..ဗုဒ္ဒသာသနံ စီရံတိဋ္ဌတု
အင်းဗျာ အမှန်က … ဒီလိုအယူတွေ ဆိုတာက လည်းဗုဒ္ဓ ရှင်တော် ကိုယ်တိုင်ရှိတုန်းကတည်းက
ကွဲလွဲနေကြတာကိုးဗျ။ သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ပေါ့ဗျာ။ အေးအးချမ်းချမ်းနဲ့ တရားအားထုတ်နေရင်တော့
ကောင်းပါတယ။် ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း ဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာ
ဟိုပို့စ်မှာကျုပ် မန့်ခဲ့သေးတယ် ။ လက်ရှေင်နေတယ်ဆိုတာ အကြောင်းရှိတယ်ဟေ့
နောက်မှပြောမယ် ။ ဘယ်သူမှ စိတ်မချမ်းသာဘူး
ကျုပ်တို့က စာဘဲဖတ်လေ့ရှိတာ ။ ဒီကောင်တွေမြင်ရရင်စိတ်ညစ်တယ်ကွ ။
သူခိုးက လူပြန်ဟစ် ဆိုတာ ဒါမျိုးဟေ့ ။
မောင်မိုးပြာအိဆရာဘာလို့ ပြာ ဆိုတဲ့အထဲမှာ အဖြေဝင်ပေးလေ့ရှိတယ်
ဒီကောင်တွေ လက်မခံဘူး ( ဘာခံချင်လဲတော့မသိဘူး )
သူရို့ ပို့ စ်တွေ ဝင်ဖတ်ရင် ဆဲချင်လွန်းလို့ ပါ
အကိုရေ မိုးကောင်းကင်က မိုးတွင်းမို့ မည်းနေတယ်
ကျုပ်အမြင်တော့ မိုးပြာလို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဆိုတာ အတွေး သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်ပေါ်အခြေခံတဲ့ ၀ါဒဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်သလိုတွေး ၊ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ကို ကိုယ့်နာမည်တပ်၊ ကိုယ်တိုင်ဂိုဏ်းချုပ်/ဘုရားလုပ်ပြီး အဲဒီဝါဒကိုဖြန့်ချီရင်ဖြင့် ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး..။
ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီအဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့ဝါဒကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ် ၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒအပါအ၀င် အခြားဗုဒ္ဓဘာသာအယူများက ဗုဒ္ဓ၀ါဒ မဟုတ်ဘူးလို့ တိုက်ရိုက်စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေထဲကတချို့က-
၁- လက်ရှိ သံဂါယနာတင် ပိဋက တွေဟာ (သူတို့လိုရင်လိုသလိုကိုးကားတဲ့ ကာလာမသုတ်မှအပ) ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ စွပ်စွဲပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်တွေအနက်အချို့က အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေဟာ တတိယသံဂါယနာတင်မှ ပိဋကထဲ စပါဝင်လို့၊ သုတ္တန်တွေထဲက အချို့ဟာ အခြားဘာသာများ(ဥပမာဟိန္ဒူ)ရဲ့ ကျမ်းစာတွေထဲမှာ ပါတာတွေနဲ့ ဆင်တူလို့၊ ၀ိနည်းပါဠိတော်တွေဟာ ဘုရားဟောမဟုတ်နိုင်ဘူး- ဘုရားဆိုတာ လူကျင့်နိုင်တဲ့စည်းကမ်းပဲချပေးတယ်။ လူမကျင့်နိုင်တာတွေဟာ ဘုရားဟောမဖြစ်နိုင်လို့ စသဖြင့် အကြောင်းပြပါတယ်။
၂- လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒရဲ့ ဦးဆောင်ရှေ့ရွက် ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ မှေးမှိန်အောင် အထက်နည်းအောက်နည်းများနဲ့တိုက်ခိုက်စွပ်စွဲပါတယ်။
၃- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒရဲ့ ပဋိယတ္တိသာသနာကြီးရဲ့ ပင်မကျောရိုး ဆဌသံဂါယနာမူ ကျမ်းစာများနဲ့တကွ ဆဌသဂါယနာတင်မှု့တခုလုံးကို သေးသိမ်အောင် အမြင်မှားအောင် စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။
၄- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒရဲ့ ပဋိပတ္တိသာသနာကျောရိုးဖြစ်တဲ့ သတိပဌာန် ၀ိပဿနာတရားများကို အကျိုးမဲ့ လူဖြစ်ရှုံးစေတဲ့ တရားမှားများအဖြစ် စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။
၅- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒရဲ့ ကျောရိုးအယူဖြစ်တဲ့ မဂ်လေးပါး၊ ဖိုလ်လေးပါး၊ နှိဗ္ဗာန် လို့ ဆိုအပ်တဲ့ လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးကို ဘုရားမဟောတဲ့ ဘုရားမယူတဲ့ အယူအဖြစ် စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။
၆-လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကြီးရဲ့ ထေရ၀ါဒကို ကျောရိုးပြုပြီး အခြားအယူများ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု့များနှင့်တကွ မြန်မာ့လူမှု့ဓလေ့အဖြစ်ပါ တသားတည်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့-
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာ အယူ၊ အကျင့်၊ ထုံးတမ်း၊ ဓလေ့ တွေထဲက
အမှားအယွင်း အကျအပေါက် အနာအဆာများကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး အဲဒါတွေဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် လို့ ခေါင်းတပ်စွပ်စွဲ တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
၇- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေရဲ့ ၀ိနည်းမညီညွတ်တာတွေ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ထောက်ပြပြီး ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတခုလုံးကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
၈- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒီသံဃာများရဲ့ အကြီးအမှုး သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကို အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ မသင့်လျှော်တဲ့လုပ်ရပ်တချို့ကိုအကြောင်းပြုပြီး ပြည်သူတွေ အကြည်ညိုပျက်အောင် အခွင့်ကောင်းယူ ၀ါဒဖြန့်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ထေရ၀ါဒသာသနာကိုက သူများအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်လောက်အောင် အားနည်းချက်တွေ အလွန့်အလွန်များပြားနေပြီး အဲဒါကို သိလျှက်နဲ့ သာသနာ့ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက လျစ်လျူရှု့ခဲ့၊ လျစ်လျူရှု့ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ လို သာသနာ့အာဇာနည်တွေ
အခုတော့လဲ ထပ်ကိုမပေါ်တော့ တာကြောင့်
ကျုပ်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကိုက အင်မတန်ချိနဲ့နေပါပြီ..။
မိုးပြာဆိုတာ အပြင်ရန်ဆိုတော့ မြင်ရသေးတယ်…
မမြင်ရတဲ့ အတွင်းရန်တွေကိုလဲ သတိထားကြည့်သင့်ကြပါတယ်။
အဲဒါတွေကမှ အဓိက ပြဿနာ…..။
(ကျုပ်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကို အင်မတန်ချိနဲ့နေပါပြီ..။)
နဂိုက အခြေမခိုင်ခဲ့တော့ ချိနဲ့ရတော့မှာပေါ့ ပါလေရာ ။
နေ၀င်းလက်ချက် နှစ် ၅၀ ခံခဲ့ရသလို အသောက လက်ချက်နှ စ်ထာင်ချီခံနေရတာ နင်မသိရောလေသလား။
နေ၀င်း၊ သန်းရွှေစကား ဘုရားဗျာဒိတ်လို ထင်နေတဲ့ ကြံဖွတ်တွေလို
အသောက လက်ချက် တတိယ သင်္ဂါယနာ (အသောက လူလည်လုပ်မှု)ကြီးကို
နင်က ဘုရားဟောလို ယူစွဲနေတော့ ခက်ရတာပဲ….
မှတ်ထား ဗုဒ္ဓက သူ့တရားမှန်ရင် တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ ညီရမယ်တဲ့။
ဒါဆိုရင် အသောက လက်ထက်ပွား နင်တို့အပီ ကြည်ညိုနေတဲ့ စာပေတချို့ (စိတ္တဇစာပေ)ကို တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ ကိုက်ကြည့်ပေါ့။ ဒါပဲ။
ကျုပ်အထင်တော့ လက်ရှိပိဋကသုံးပုံနဲ့တကွ ဆဌသံဂါယနာတင် ဋီကာများဟာ ဘုရားဟောတိုက်ရိုက်မဟုတ်တာက ၉၀%လောက် ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ အဓိကအနှစ်သာရ ၁၀%ကို မယူရတော့ဘူးလား၊ မယုံရတော့ဘူးလား…..။
ကြက်ဥမှာ အခွံဘာကြောင့်ပါသလဲ … သိလား…
အထဲမှာရှိတဲ့ အနှစ်ကနေ အကောင်ပေါက်ဖို့ ပါရတာ…။
အဲဒီအတွေးအခေါ်ကိုလက်မခံနိုင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြက်လုပ်ပြီး အနှစ်ချည်းပဲ ဥ ကြည့်…။
(လက်ရှိပိဋကသုံးပုံနဲ့တကွ ဆဌသံဂါယနာတင် ဋီကာများဟာ ၉၀%လောက် က ဘုရားဟောမဟုတ်တာနဲ့ပဲ ကျန်တဲ့ အဓိကအနှစ်သာရ ၁၀%ကို မယူရတော့ဘူးလား၊ မယုံရတော့ဘူးလား…..။)ဆိုတော့
mggwa ပြောသလို တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ တရားတွေကိုတော့
အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့ ကြက်သားဟင်းအိုးကြီးနဲ့ သန့်သန့် စင်စင် ကြက်သားဟင်း တစ်ခွက် သင်ဘာကိုစားမလဲ၊ ကျနော်ကတော့ စိတ်ချလက်ချ တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့တရားတွေကိုပဲ နဲချင်နဲပါစေ အပြည့်အ၀ယုံတော့မယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်ခံယူချက်နဲ့ ယနေ့မိုးပြာနဲ့ ကိုက်ညီလို့ ကျနော်ကို မိုးပြာလို့ ဆိုချင်လိဲ ဆိုလိုက်ပါ။
ကျတော်ကတော့ ပြာတာ၊ ဘာတာထက် ဗုဒ္ဓတရားအစစ်အမှန်ကိုပဲ
အော်နောက်ပြီးတော့ ကျနော် အရိသစ္စာတရားတွေ လေ့လာခွင့်၊ သိခွင့် လမ်းကြောင်းရတာဟာ ဒီမန္တလေးဂေးဇတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီဂေးဇတ်အဖွဲ့သားများကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။
နောက်ပိုင်းသတင်းကြားရလို့ ပိုမို ၀င်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာမိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အပေါ်က ဆရာတော်ဦးဥာဏအကြောင်းရေးထားတာမှာ.. ကျန်နေတာလေးဖြည့်ပေးမလို့..
၃-၄နှစ်လောက်ရှိနေပြီထင်တယ်..။ အဲဒီမိုးပြာဆရာတော်ကို.. မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက.. ဖမ်းထောင်ချထားပါကြောင်း..
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မတရား ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာကို.. အကြိမ်ကြိမ်ခံရသူဖြစ်ပါကြောင်း.။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့.. မြန်မာပြည်ကိုကမ္ဘာမှာဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အရှိဆုံးတိုင်းပြည်စာရင်းက ထွက်ချင်ရင်.. အဲဒီဆရာတော်ကို.. ထောင်ကအရင်ဆုံးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး.. မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း မြန်မာပြည်တွင်းမှာ.. လွတ်လပ်စွာသာသနာပြုခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါကြောင်း..
အဲဒီနောက်ကမှ.. ခရစ်ယန်.. အစ္စလမ် စတဲ့သာသနာတွေကို.. လွတ်လပ်စွာသာသနာပြုခွင့်ပေးဖို့.. စဉ်းစားသင့်ကြောင်း…
.. ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်း (တောင်မှ) ဖိနှိပ်ခွဲခြားတာရှိပါတယ်.. အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းတာရှိနေပါတယ်… ဆိုတာကို.. ကမ္ဘာကိုသိအောင် ကြေငြာ ပြောသင့်ကြောင်း…
သူကြီးမသိလို့နော် မိုးပြာက မဟာယာနလားဟင် တကယ်မသိလို့။
ကျွန်တော်ဖတ်ရသလောက်တော့ မဟာယနလည်းမဟုတ်ပါ.. မကြာခင် ထပ်တင်ပေးမှာ မို့လို့ စောင့်စားဖတ်ရှုစေချင်ပါတယ်
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ (ပါလေရာတို့ အခေါ် မိုးပြာ)ဟာ ထေရ၀ါဒလည်း မဟုတ်သလို မဟာယာနလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေအပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒ၊ မဟာယာနတို့နှင့် ဖွင့်ဆိုပုံ မတူကွဲပြားသည့် သီးခြားဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဝါဒကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ ထေရ၀ါဒ၊ မဟာယာန၊ လာမားဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစတဲ့ အယူဝါဒကွဲများဖြင့် အသီးသီး ရှိနေကြတာကို မနာလို မရှုစိမ့်နိုင်ကြသော ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အယူသီးထေရ၀ါဒီတချို့မှ အပုတ်ချ ၀ါဒဖြန့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် မရွှေ ကြည်။
” ပစ္စုပ္ပန္နကမ္မ၀ါဒ ဒဿန အရိယသစ္စာ တရားဓမ္မ ”
၀က်ဆိုက်တွင် မူရင်းအတိုင်း လေ့လာလို့ ရပါတယ်။
ကျုပ်အထင်အမြင်သက်သက်လေးတော့ ပြောခဲ့မှဖြစ်မယ်။ ( Credit : ဦးပါ)
မိုးပြာရော.. ထေရ၀ါဒရော.. မဟာယာနရော.. ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာရော..ကိုရမ်ကျမ်းရော.. သမ္မာကျမ်းဟောင်း/သစ်ရော… လိုက်ဖတ်ဖူးတယ်.. လေ့လာဖူးတယ်..။
တချို့အတွေးအခေါ်တွေကြိုက်တယ်..။ တချို့မကြိုက်ဖူး..။ တချို့ကို.. နောက်မှထပ်ထည့်ထားတယ်တွေ့မိတယ်.. တချို့က သင်္ချာမတတ်သူတွေထည့်ရေးထားတာ မြင်မိတယ်.. တချို့ကတော့ အင်မတန်ရှေ့နောက်ညီတယ်..။ တချို့ကတော့.. အသုံးဝင်တယ်..
ပြောချင်သူတွေပြောကြပါစေ..မှန်တာမှားတာဘေးချိပ်.. လူတွေ ပြောနိုင်တွေးနိုင်ရေးနိုင်ခွင့်အတွက်.. (ကျုပ်က.. ကိုယ့်နေရာကနေ.. တတ်နိုင်သလောက်..). ကာကွယ်ပေးသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်း..
” အမြဲလက်ဇောင်းထက်နေတဲ့ ရွာသူ/သား တွေတောင်
လက်ရှောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ”
အဘ သဘောထားကို ပြောပါရစေကွယ် ။
အဘ ထေရ ဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာပါ ။
ပိဋကတ် သုံးပုံထဲက ၊ အဘိဓမ္မာ နည်းအတိုင်း အတိအကျသွားတဲ့ ၊
ဖားအောက် နည်းကို အဓိက ယုံကြည်တယ် ။
သို့ပေမယ့် ၊ မိုးကုတ် ၊ မဟာစည် ၊ သတိပဋ္ဌာန် နည်းများကိုလည်း ၊
လက်ခံတယ် ၊ အဆင်ပြေသလို ကျင့်သုံးတယ် ။
မိုးပြာ ကိစ္စကို ဝင်မပြောရတာက ၊
ကိုယ် နိုင်နိုင် နင်းနင်း မရှိတဲ့အပိုင်းမှာ ၊
မတောက်တစ်ခေါက် အသိ နှင့် ဝင်ပြောရင် ၊
အကျိုးထက် ၊ အဆိုး ပိုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ ။
ဝင်ဆဲရုံ သက်သက်တော့လည်း မပြောချင်ဘူးလေ ။
ရွာသားကြီး တစ်ယောက် အနေနှင့် ၊
လက်ရှောင်နေတယ်လို့ ဆိုရင်လည်း ခံရတော့မှာပဲ ။
ကိုယ်တွေက ဒီဖက်မှာ ပညာအားနည်းမိတာကိုး ။
အပေါ်က Tar Tay, မောင်ပေ နဲ့ အဘ Foreign Resident ရေ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ လက်ရှောင်တယ်ဆိုတာ အဲဒီ post တွေ ပြန်လှန်ရေးသားထား ခြင်း၊ ချေပထားခြင်း တွေကို အနည်းအကျဉ်းသာ တွေ့ရတဲ့ အတွက် မချင့်မရဲ ဖြစ်တာကြောင့် ရေးလိုက်ရတာပါဗျို့.. တတ်သိ နှံ့စပ်တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း ပြန်လည် ချေပစေလိုတာကြောင့်ပါ..
ကျုပ်အမြင်ကျုပ်အထင်ကတော့ဘုရားကလည်း သစ္စာလေးပါး
သိစေဖို့ ဟောခဲ့ရာမှာခေတ်ကာလအလိုက် ဂါထာတစ်ပုဒ် နှစ်ပိုဒ်
ဟောသည်များကို ကျုပ်တို့ လိုဖွတ်ကျားများနားလည်ဖို့နှောင်း
ပညာရှင်များက အဋ္ဌကထာ ဋီကာများဖြင့်ဖြေရှင်းရေးသားကြ
သည် ဟုမြင်မိပါကြောင်း သို့ သော် သစ္စာလေးပါးသိရန် ကျင့်သော
အကျင့်များအား မကျင့် စေဖို့ဟောပြောသည်မှာမသင့် ကြောင်း၊
ဘုရားသည်ပင် သင့် တော်မည့်ကမဌန်းရွေးဟောသဖြင့်ကမဌန်း
လေးဆယ်ဟုကြားဖူးပါကြောင်း ၊ ပေါက်ကရလုပ်သောသူများက
မိမိကိုယ်ကို ထေရဝါဒ ဟု အသွင်ယူနေသဖြင့်နစ်နာပါကြောင်း
ထေရဝါဒစစ်စစ်များ တိမ်မြုတ်လျက် အမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာများသာ
ထင်ရှားနေသဖြင့်သေးသိမ်စရာများဖြစ်နေကြောင်း
ကိုယ့် သဏ္ဌန်တွင်သာသနာတည်ရန်ကြိုးပန်းသင့် ကြောင်း
သို့ မှသာ အမှန်အမှားခွဲခြာနိုင်မည်ထင်မိပါကြောင်း
ကျွနုပ်အား ဆဲမည့် သူရှိက ဆဲကြပါလေကုန်သတည်း။
ဘာမျှ မသိပါသောကြောင့် ခက်ပါပေ၏
အပေါ်က အဘဖော ပြောသလိုပါပဲ…ကိုယ်မနိုင်နင်းတဲ့ အပိုင်း ဝင်ပြောရင် ပိုဆိုးနေမှာ စိုးတာပါပဲ။
ပြီးတော့ကာ အမေး နွားကျောင်းသား အဖြေ ဘုရားလောင်း ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့..။ ကြေလည်အောင်
ရှင်းဖို့ အင်မတန် ခက်တာ။ လက်ခံအောင်ပြောဖို့ဆို သာဝေးသေးဗျို့။
ကျုပ်ညီ အငယ်ဆုံး တစ်ယောက်ဟာ အင်မတန် စကားကပ်တယ်..။ကျုပ် စာအုပ်စင်
ဝင်မွှေပြီး သူမသိတာ..အမှန်တော့ ကျုပ်ကို ကျပ် ချင်တာ နဲ့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေ မေး
တတ်တာပဲ။၁၀နှစ်လောက်ကွာတဲ့ ညီ ဆိုတော့ ကျုပ်လည်း တတ်သလောက်ဖြေရတာပဲ..။
သူ့မေးခွန်းတစ်ချို့က ခု မိုးပြာ ကိုယ်တော်များ မေးတာနဲ့တောင် ဆင်သေးသဗျာ။သာဓက ပြရရင်-
သူက- ကိုကြီးရေ…သဗ္ဗေသင်္ခါ အနိစ္စ တဲ့ဗျ..အရာတိုင်း သင်္ခါရ ပဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဘာလို့ ဘုရားဖြစ်
ပြီးတောင် အဲဒီ ဝဋ်ကြွေး တွေ အနိစ္စ မဖြစ်သတုန်းဗျ.. ဆိုတာမျိုး…နောက်တစ်ခါ.. ရှေ့ဘဝနောက်
ဘဝ ဘုရား မဝေဖန်ဘူး ဆို တာ ဘာလို့တုန်းတဲ့..။ကျုပ်လည်း အဲဒီလို မဝေဖန်တာက မေးခွန်းမှား
နေလို့ကွ လို့ ပြောရတယ်။ မင်းကို ယုန်ဦးချို ဘယ်လောက်ရှည်သလဲ မေးရင် ဘယ့်နှယ်ဖြေမလဲ
မေးတော့ ကိုကြီး က ကပ်ပြောတယ်တဲ့ဗျာ..။
တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ တရားတွေ လေ့လာချင်ရင်..ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ ဆိုတာ အရင်လေ့လာကွ လို့..
နောက်ပြီး ချည်းကပ်နည်း မှန်မှ မင်းအတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့..။နို့မို့ မင်း ဒယ်အိုးပဲကွာလို့။
အဲဒီ ဒယ်အိုးလည်း သူမယုံပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က စလို့ သင်္ကြန်တွင်း တရားစခန်း မပျက်
မကွက်ဝင်တော့ ကျုပ်ဝမ်းသာမိတယ်။ တရားရရ မရရ..သင်္ကြန်တွင်း သောက်စား ရန်ဖြစ်နေတာ
မျိုး မလုပ်လို့ စိတ်အေးရတာပဲ။
ကျွန်တော့ အမြင်အရပြောရရင်…ဆရာတော်ဟောကြားတဲ့ တရားမှားတယ် လို့ပြောတာထက်…သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမျိုး မဟုတ်ဘဲ…ကိုယ်သေသေချာချာ လေ့လာကြည့် ပြီးပြီလား?..စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်…မတူဘူးဆိုတာ…ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်နှိမ့် လို့လည်းဖြစ်နိုင် သလို..ကိုယ့်ထက် ဥာဏ်ကြီး လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်..ကိုယ်ဥာဏ်မမှီ လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်…ကိုယ့် ဥာဏ်မမှီလို့…လက်မခံတာ ဖြစ်နိုင်ခြေများ မယ်လို့ထင်ပါတယ်…ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ အင်မတန်မှ..တွေးခေါ်မျှော်မြင်ကြီးတဲ့ သိပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းတောင်မှ…သူသေတဲ့ အခါသူ့ဦးနှောက်ကို ခွဲ စိတ်ကြည့်တော့…သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်ဘဲ..အသုံးပြုရတယ် ဆိုလားဘဲ…ကျွန်တော်တို့သာမန်လူ ဆိုရင်လုံးလုံး အဖြူထည်ဘဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..ဒါကြောင့် ဟာသ ကာတွန်းတောင်ဘာပြောထားလဲ ဆိုတော့
အမေရိကန်၊ ဂျာမန်ဦးနှောက်တွေက ဈေးပေါတယ်…မြန်မာ ဦးနှောက်တွေက ဈေးကြီးတယ်တဲ့..ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာဦးနှောက်တွေက အသုံးမပြုရသေးလို့ အဖြူထည်တွေ ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး ဟာသ ဆရာက ဆိုလိုတာတွေ့ရပါတယ်..
” အတု တစ်ထောင်…အယောင် တစ်သိန်း ..အပလိန်း အနန္တ”…ဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ…အခုမြန်မာပြည်
ကလူတွေဟာ …ဦးရေများတဲ့ ထေရ၀ါဒနောက်ကို လိုက်နေကြတယ်..ကမ္ဘာလူ ဦးရေနဲ့
နှိုင်းယှဉ်ရင်..ဒို့ထက်ဦးရေများတဲ့ ခရစ်ယာန်မူစလင်တွေရော မမှန်နိုင်ဘူးလား?..
မြန်မာတွေဟာ..တခြား အရေးကိစ္စတွေမှာ ကျီးများလိုက်ကြာတာ…ဟိုဟာမကြိုက်သည်ဟာ မကြိုက် ပြဿနာ စောဒက လည်းတော်တော်လေး တက်ကြပါတယ်..ဘိနပ်လေး တစ်ရံ ၀ယ်တာတောင်မှ….ဘယ်လိုညံ့တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့..ဒါအနှိမ့်ဆုံးနေရာမှာ ..စီးဖို့ ဘိနပ်နော… ဒါတွေကျတော့ ..လူတွေ စစ်ဆေးလိုက်ကြတာ…..ဘ၀ လမ်းညွှန်အဖြစ်..ဦးခေါင်ပေါ်ရှိးခိုးဦးတင်မည့် ဘာသာရေး ကြတော့ ဘယ်သူမှ..မစစ်ဆေးရဲ ကြဘူး…၀ိဘစ်ဇ မလုပ်ကြဘူး..
၀ိဘစ်ဇ လုပ်ရဲ့တဲ့ ဆရာတော့ ဆိုလို့မြန်မာပြည်မှာ ဆရာတော်..ဦးဥာဏ တစ်ပါးဘဲ ကျွန်တွေ့ဘူးတယ်..
ကျွန်တော် ဘာသာရေးမှာ သူများလောက် မလေ့လာဖြစ်ပေမဲ့..အတော်အတန်တော့ တီးခေါက်မိတယ်..ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ ..ဘုန်ကြီးကျောင်းသားလုပ်ခဲ့ ဖူးတယ်..ဘုန်းကြီး နဲ့အစုံပေါင်းခဲ့ဖူးတယ်..တရားလည်း ရိပ်သာပေါင်းစုံ..၁၄/၁၅ ကြိမ်ထက်မနည်း လေ့လာအားထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်..ဥဒယ၀ယ ဥာဏ် ဖြစ်ပျက်ကိုယ်လည်း တဖြိုင်ဖြိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်..နောက် လုံးရပ်သဏ္ဍာန်ပုံဟန်နိမိတ်..အချိန်ဆိုမရှိ၊နေရာဆိုတာမရှိ.နာမည် လည်းခေါ်မရ..နေရာပြလို့မရ..ငါဆိုတာမရှိ၊သူဆိုတာမရှိ..သုညသဘောလည်းဆိုက်ခဲ့ရဖူး.ဘာမျ မရှိတဲ့ဟာလာ ဟင်းလင်းပြင်လိုလည်း ဖြစ်ခဲ့ရဖူး..ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကြွားနေတာ မဟုတ်..ဒီဘာမှ မရှိတဲ့ သဘောနဲ့ ဘ၀ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့ဖူးတယ်…နောက်ဆုံးဒီဖြေရှင်းတဲ့နည်းဟာ..ကိုယ့်မယား..သားသမီး အပေါ်လည်း ၀တ္တရားပျက်..လောကကြီးဟာ ဘာမှ မဟုတ်…လောကကြီးကိုလည်းအပြစ်မြင်လာတယ်..
..တလောကလုံးကလည်း..ရုပ်နာမ်ကမကင်း..ဒါဆိုရင် ..တလောကလုံး…ဒုက္ခဆိုတဲ့ အတွေးတွေဝင်လာ..
ဘာမှ မရချင်..ကြာလာတော့ စိတ်ဓါတ်ကျ…အစစအရာရာ ညံ့ဖျင်း..ဘာမှ မလုပ်ချင်းးမကိုင်ချင်..နောက်ဆုံး..ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်..စသည်..စသည်ဖြင့်???`….
ဟာ ..ဒါဆိုရင်..ငါသိတဲ့ တရားဟာ ဘယ်မှာ အသုံးခါရမလဲ?ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်..
ဒီလိုနဲ့ ဘာသာတရားဆိုတာ ဘ၀လမ်းညွှန် အဖြစ် အသုံးချဖို့..ဆိုတဲ့ ဆရာတော်တရားကို..အင်တာနက်ကနေ တဆင့် လေ့လာခွင့်ရတော့…ဒါကြောင့် ဆရာတော် တရား..ကိုယ်ဘယ်လောက် သေချာ လေ့လာပြီးပြီလဲ?.လို့ကျွန်တော်မေးရတာပါ..
ဘ၀လမ်း ညွှန်း အဖြစ် apply အသုံးချဖို့..ပညာရပ်ကို အမျိုးမျိုးလေ့လာနေကြတာဘဲ မဟုတ်လား?
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာသာရေးကိုပညာရပ်တခုအနေနဲ့ လေ့လာတယ်..ဘယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် လေ့လာတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်၊မူစလင်ကျောင်းလည်းရောက်ဖူးတယ်..
ပြောချင်တာ…ကိုယ့်လေ့လာတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုဟာ..
ဘ၀လမ်းညွှန် အဖြစ်…တကယ်ဘဲ ကောင်းမွန် မှန် ကန်လှပါတယ်ဆိုရင်…မြန်မာပြည်ဟာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ…ဒုစရိုက်မှု များတဲ့ တိုင်းပြည် စာရင်း ထဲ…ဘာဖြစ်လို့ပါနေရပါသလဲ?..ဘာဖြစ်လို့ အဆင်းရဲ့ ဆုံးတိုင်းပြည်ထဲ မှာ ပါဝင်နေရပါသလဲ? တကယ်တော့ မှန်ကန်တဲ့ သဘောတရားတခုကြောင့် လူတွေရဲ့..စီပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး အစစ ပိုမို အဆင်ပြေရမှာပေါ့..ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ? ဆိုတာ..မစဉ်းကြဘဲ…တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ လူကြီးတွေကအစ..တိုင်းပြည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင်…သူများနိုင်ငံမှာ ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို..အနာဂတ်လူငယ်တွေကို မလေ့လာ စေဘဲ..ဗေဒင်၊ယတြာ၊ နက္ခတ် ၊ နတ်..သင်္ကြန်စာက ဟောစတမ်း စသည့်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ် နေကြတာ ကိုတွေ့တွေ့ပြီး အံ့ သြတယ်ဗျာ…လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်..
“ကျွန်တော့ အမြင်အရပြောရရင်…ဆရာတော်ဟောကြားတဲ့ တရားမှားတယ် လို့ပြောတာထက်…သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမျိုး မဟုတ်ဘဲ…ကိုယ်သေသေချာချာ လေ့လာကြည့် ပြီးပြီလား?..စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်”
ဒီ အထိတော့ သဘောတူပါတယ် Ko out of… ခင်ဗျာ။
“…မတူဘူးဆိုတာ…ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်နှိမ့် လို့လည်းဖြစ်နိုင် သလို..ကိုယ့်ထက် ဥာဏ်ကြီး လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်..ကိုယ်ဥာဏ်မမှီ လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်…ကိုယ့် ဥာဏ်မမှီလို့…လက်မခံတာ ဖြစ်နိုင်ခြေများ မယ်လို့ထင်ပါတယ်”
အဲ့တော့ မိုးပြာဝါဒကို မှားပါးတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ…..
“မြန်မာတွေဟာ..တခြား အရေးကိစ္စတွေမှာ ကျီးများလိုက်ကြာတာ…ဟိုဟာမကြိုက်သည်ဟာ မကြိုက် ပြဿနာ စောဒက လည်းတော်တော်လေး တက်ကြပါတယ်..ဘိနပ်လေး တစ်ရံ ၀ယ်တာတောင်မှ….ဘယ်လိုညံ့တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့..ဒါအနှိမ့်ဆုံးနေရာမှာ ..စီးဖို့ ဘိနပ်နော… ဒါတွေကျတော့ ..လူတွေ စစ်ဆေးလိုက်ကြတာ…..ဘ၀ လမ်းညွှန်အဖြစ်..ဦးခေါင်ပေါ်ရှိးခိုးဦးတင်မည့် ဘာသာရေး ကြတော့ ဘယ်သူမှ..မစစ်ဆေးရဲ ကြဘူး…၀ိဘစ်ဇ မလုပ်ကြဘူး..”
“ပြောချင်တာ…ကိုယ့်လေ့လာတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုဟာ..
ဘ၀လမ်းညွှန် အဖြစ်…တကယ်ဘဲ ကောင်းမွန် မှန် ကန်လှပါတယ်ဆိုရင်…မြန်မာပြည်ဟာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ…ဒုစရိုက်မှု များတဲ့ တိုင်းပြည် စာရင်း ထဲ…ဘာဖြစ်လို့ပါနေရပါသလဲ?..ဘာဖြစ်လို့ အဆင်းရဲ့ ဆုံးတိုင်းပြည်ထဲ မှာ ပါဝင်နေရပါသလဲ? တကယ်တော့ မှန်ကန်တဲ့ သဘောတရားတခုကြောင့် လူတွေရဲ့..စီပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး အစစ ပိုမို အဆင်ပြေရမှာပေါ့..ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ? ဆိုတာ..မစဉ်းကြဘဲ…တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ လူကြီးတွေကအစ..တိုင်းပြည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင်…သူများနိုင်ငံမှာ ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို..အနာဂတ်လူငယ်တွေကို မလေ့လာ စေဘဲ..ဗေဒင်၊ယတြာ၊ နက္ခတ် ၊ နတ်..သင်္ကြန်စာက ဟောစတမ်း စသည့်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ် နေကြတာ ကိုတွေ့တွေ့ပြီး အံ့ သြတယ်ဗျာ…လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်..”
ဒီနေရာမှာတော့ သေချာရှင်းအောင်ပြောသင့်ပါတယ်။ Ko out of true…ပြောပုံက ထေရ၀ါဒကြောင့်ဘဲ ဖြစ်နေသလိုလို……
အပေါ်မှာ ဦးဦးပါလေရာလည်း ရှင်းပြီးပါပြီ။ အပြင်က ရောလာတဲ့ မဟာယနနဲ့ Hindu အယူတွေတွဲပြီး မိုးပြာကိုတန်းတင်ချင်တာနဲ့ ထေရ၀ါရကိုမသိမသာပုတ်ခတ်တာမျိုးကတော့…..
မိုးပြာဆရာတို့ က ရိုးသားဖို့လည်းလိုမယ်ထင်ပါတယ်။
Microsoft က microsoft word ဆိုပြီး word processing software ထုတ်ပါတယ်။
ဒါကို အခြားcompany တစ်ခုက ကူးယူပြီး အနေအထားအပြင်အဆင် အနည်းငယ်ပြောင်းပြီး ရောင်းမယ်ဆို တရားစွဲခံရမှာပါ။
သေချာတော့ မသိပါ…. word micro စသဖြင့် ဆင်တူရိုးမှားနာမည်နဲ့ရောင်းရင်တောင် ပြဿနာရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ပြီးသား brand တစ်ခုကို ဆင်တူယိုးမှား နာမည်မျိုးတောင်ယူလို့မရဟုထင်ပါတယ်။
မိုးပြာဟာ သူဘာသာသူဆိုရင်တော့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။
အခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆင်တူယိုးမှားရိုက်တာဟုဆိုနိုင်ပါကြောင်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာက လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါကြောင်း၊ patent တင်ထားခြင်းလည်းမရှိသောကြောင့် မိုးပြာမှလည်း လိုသလို ယူသုံးနိုင်ကြောင်း၊ သိုသော့် ရိုးသားပါလို့ ကျနော် ဥာဏ်တိမ်တိမ်လေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
pazflor ရေ.. အမှန်တရားတခုကို လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကဘဲ.. မူပိုင်ယူတာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ?
မူပိုင်မယူဖို့ ဘုရားမြင်ခဲ့ လိုလည်း..ဘုရားပရိနိဗာန်စံခါနီး…ဓမ္မနဲ့ ၀ိနိယဟာ မင်းတို့ရဲ့ ဆရာဘဲ လို့ပြောတာဘဲ…အဲဒီ အချိန်မှာ ..ထေရ၀ါဒ၊ မဟာယာန မပေါ်သေးပါဘူး…အဲဒီဂိုဏ်းတွေ စပေါ်တဲ့ နေ့ဟာ ဘုရားတရားစပျောက်တဲ့နေ့ဘဲ…
ဒါကို အခြားcompany တစ်ခုက ကူးယူပြီး အနေအထားအပြင်အဆင် အနည်းငယ်ပြောင်းပြီး ရောင်းမယ်ဆို တရားစွဲခံရမှာပါ ဆိုတာ….နာမည် brand ကိုပြောတာ ဖြစ်မှာပါ..ဒါကတော့ company တရားစွဲလို့ရပါတယ်..ပြင်တယ်ဆိုတာလည်း..အဟောင်းထက်ကောင်းရင်..အသစ်ကို လူတွေ လက်ခံမှာဘဲ..နည်းပညာကို ကပ်စည်းနဲလို့ သူ့နည်းကို ယူလို့ တရားစွဲတယ်ဆိုရင်သူရှုံးမှာဘဲ..
ကမ္ဘာမှာ..ဘယ်နည်းပညာ မဆို မလျှိုကြဘူး..လူတွေ အကျိုးရှိစေမည့် အရာဆိုရင် လူတွေသိအောင် အကုန်ဖြန့်ပေးရမယ်..
သို့သော်နည်းပညာကတော့..သူလုပ်တဲ့ နည်းကကောင်းလွန်းတယ်…ဒါမရဘူး လို့ပြောလို့မရ..ပါဘူး..အခုမြန်မာပြည်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေမှာ မြန်မာတွေ စတီ ထွင်တာ မဟုတ်ပါဘူး…သူများဆီက ဖေါ်မြူလာကို ယူပြီး လုပ်နေတာဘဲ..ဘယ်ပညာ ရှင်ကမှ..တရားမစွဲပါဘူး..ဒီနည်းပညာတွေ များများပြန့်တော့ လူတွေ…ရောဂါဘယကကင်းဝေးတာပေါ့…
အခုတော့.. မှန်ကန်တဲ့ သဘောတရားတခုဟာ…လူတွေယူသုံးမှာကြောက်လို့ ကပ်စည်းနည်းတာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ? လူတွေဘုရားတရား ကိုယူသုံးလေ..လောကကြီးငြိမ်းချမ်းလေဘဲ ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လား?
အခု ဆရာတော် ဦးဥာဏဟာ ထေရ၀ါဒ တွေလက်ခံတဲ့ သဘောတရားနဲ့ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းပါ..လုံးဝမတူပါ…အမှားတခုကို လုပ်မိလို့ ထောက်ပြတဲ့ လူကို ရန်ငြိုးကြီးနေတာ..
ကိုယ်လည်း ကံအကြောင်းဟောပြောရင်းနဲ့…ဖန်ဆင်းရှင်ကို စော်ကားပုပ်ခတ် သလိုဖြစ်နေတာဘဲ..ဒါကို ခရစ်ယာန်တွေ ဘာမှ မပြောကြပါဘူး..ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပါ..
ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးထဲမှာ ရှိနေတတ်တာလေးပါ။
အယူဝါဒ၊ ဘာသာတရား ဟောပြောညွန်ပြတဲ့ ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်များ ဟာ သူတို့ဟောကြားသလို သူတို့ လိုက်နာကျင့်ကြံ ခြင်း မရှိမှုတွေ ရှိတာကြောင့် ဒီလို ပြသနာများ ဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်မ အတွေး တက်တက်စင်အောင် မှားနိုင်ပါသည်။
ချိုးခြံစွာ ကျင့်ကြံရမဲ့ အစား လောဘတွေ တက်နေတာ ……
ကိလေသာကို ချုပ်တည်းရမဲ့အစား ဒေါသတွေ ထွက်နေတာ ……
တစ်ခါတစ်ခါ လူတွေ ကဘဲ ရဟန်း တွေကို ဖျက်ဆီး နေသလား တွေးမိသေး။
ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ကို မဆိုလိုပါ။
အများကို တရားဟောပြသလို မိမိကိုယ်တိုင် မကျင့်ကြံသူများ ကိုဆိုပါသည်။
ဒီတော့ မည်သူမဆို အများကို သာသနာပြုမည် ဆိုပါက မိမိ ကိုယ်ကို ဦးစွာ ပထမ ဝေဖန်သုံးသပ် သင့်ပါသည် လို့ ထင်မိ တွေးမိပါ၏။
ဆြာအုပ်ရေ.. ဒီမှာ တင်ဖူးတဲ့ လင့်ကလေး..
မတင်ခင်ရှာ သေးတယ်ဗျ.. မတွေ့လို့ပါ..
ကျွန်တော်နည်းနည်း လေး ပြောကြည့်မယ်နော် .. အဟီး .. တိုက်ခိုက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါ .. ငြင်းခုံချင်ရုံသက်သက်ပါ ..
၀ါဒဖြန်တဲ့သူက မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာပြီးမှ ၀ါဒဖြန့်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ..
၀ါဒဖြန့်တဲ့သူက မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို အားလုံး နားလည်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့ ..
ပုံပြင်ထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို နားလည်ရင် သောတပန်ဖြစ်သွားရော .. ပြီးတော့ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားရော ..
အခုကျတော့ ၀ါဒဖြန့်တဲ့သူက သောတပန် မဖြစ်ဘဲ မဟုတ်မဟတ် (အများစုကမှားနေတယ်လို့ထင်တဲ့) တခြားဝါဒဖြန့်နေတယ်ဆိုတော့ ..
၀ါဒဖြန့်တဲ့သူက မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို ကောင်းနားမလည်လို့ပေါ့ .. ဒါဆို သူက ဘယ်လိုများမိုက်ကန်းပြီး ၀ါဒဖြန့်ရတာလဲ နိုင်ဖဲလည်းမရှိဘဲနဲ့ ..
ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြားကြားနေရတဲ့ ပုံပြင် တွေက အစစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ .. (ပုံပြင်အစစ်ဆိုတာ တကယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောတာ )
ဒါမှမဟုတ် ပုံပြင်ကတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် .. တရားတော်တွေက မှားနေတာပေါ့ ..
ပိုပြီး သေချာအောင်ပြောပြပေးစေလိုပါတယ် ..
ကျွန်တော်က မြတ်စွာဘုရားကို ယုံတယ် မြတ်စွာဘုရားခေတ်မှာ တခြား အရမ်းကျော်ကြားတဲ့သူတွေ လည်း ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥာဏ်ပညာ ကို မယုံစရာမရှိပါဘူး .. သို့သော် မြတ်စွာဘုရား ပရိတ်နိဗ္ပာန် စံသွားခဲ့လေပြီ .. အခု ဘယ်သူ့ကိုယုံရမှာလဲ .. ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့သူကဘဲ ၆ဘာသာဂုဏ်ထားကို သိနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးလား
ယခု ထရ၀ါရဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးထွက်ထားတာ ရှိလို့လား?
၂၀၀၇ တုန်းက ဘုန်းဘုန်းတွေ တဘုန်းဘုန်း လဲပြီးကတည်းက ငရဲကို သံသယဖြစ်မိတယ် .. ပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်း တွေကိုသတ်တိုင်း ငရဲချက်ချင်းမကျဘူး၊ မြေမမြိုဘူးဆိုတာ မျက်စိနဲ့တပ်အပ်တွေ့လိုက်ရတယ် .. အဟီး .. ဒါကြောင့် ပိဋကတ်သုံးပုံထဲက ပုံပြင်တွေ မှန်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငရဲကျမယ့်သူတွေ များနေပြီ .. ဒါပေမယ့် ခုထိအဲ့လို မဖြစ်ကြသေးသလိုဘဲ (နိုင်ငံခြားမှာလည်း ရှိပါတယ် ဘုရားကို စကပ်ချုပ်ဝတ်တာတို့၊ Club တွေမှာ တင်ထားတာတို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှမဖြစ်တာလဲ .. တခြားဘာသာဝင်မို့ လို့ လို့မပြောနဲ့နော် လူတွေဘဲဥစ္စာ) .. အခု ၂၀၁၂ တောင်ကျော်တော့မှာ .. ဖြစ်တာတွေ့လား . ???
ပြီးတော့ ကို out of ပြောခဲ့သလိုဘဲ .. လူ့ဘ၀မှာ Survival ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် .. ယနေ့ ထေရ၀ါရဗုဒ္ဓတရားတော် တွေက ဘာတွေကူညီနိုင်လဲ? သေပြီးနောက်ရောက်မယ့် နတ်ပြည်တို့၊ နောင်ဘ၀ တို့ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် .. သေပြီးနောင်ဘ၀ ဆိုတဲ့ဖဲချပ်က သိပ်မသေချာလှဘူး လို့ထင်တယ် NO PROOF လေ ..
ပြီးတော့ ကျွန်တော် မိုးပြာဂိုဏ်းကိုစွတ်စွဲ၊ ခုံရုံးတင်ပြီးစစ်ဆေးထားတဲ့ စာတန်းရှည်ဖတ်ရဖူးတယ် .. ဆဲတာတွေလည်းပါတယ် .. နားမလည်နိုင်ဘူး .. ပြီးတော့ .. တန်ပြန်ထွက်ဆိုချက်တွေ၊ အခြေအတင်တွေက ဘာဖြစ်လို့ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲက စာတွေကိုဘဲဘာသာပြန်ပြီး မှန်တယ်မှားတယ်လုပ်နေတာလဲ .. ဟင်?
ယနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မှားရင်မှားကြောင်း၊ မှန်ရင်မှန်ကြောင်း Proof လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား .. ဒါမှမဟုတ် Proof မလုပ်ရဲတာလား . ? ပြီးတော့ မိုးပြာဂိုဏ်း ကအတွေးအခေါ်တွေက ပိုပြီးခေတ်ဆန်တယ်ဗျ .. (ကျွန်တော် တွေးမိတာလေးပါ )
ဗုဒ္ဓဆိုတာ ပညာရှိ အတွက်ဘဲလို့လည်း ခံစားမိတယ် .. လေ့လာစရာတွေ အပုံအပင်ရှိလို့လေ .. ဘာသာအနေနဲ့ကိုးကွယ်နေရင်တော့ အခြား ခရာစ်ယာန်ဘာသာ၊ မူစလင်ဘာသာ တွေနဲ့ ဘာမှကွာခြားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ..
ယနေ့ ထေရ၀ါရဗုဒ္ဓတရားတော် တွေက ဘာတွေကူညီနိုင်လဲ…
Passing By သိချင်ရင်
http://myanmargazette.net/146805/creative-writing/comment-page-1#comment-252094 ကို ဖတ်နော် ..။ အမြင့်တက် အမှည့်ရ နိုးနိုး မလုပ်ပါနဲ့ ..။အခြေခံကို မကျေပဲ အထက်ကို တက်ဝေဖန်တာ သူငယ်တန်းကလေးက ဆယ်တန်းစာကို ဝေဖန်သလိုမျိုးပဲ ဖြစ်နေမယ် ..။
နောင်တမလွန်ကောင်းအောင်ပဲ ထေရ၀ါဒက လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ..။အခုကောင်းရင် နောင်တမလွန်အထိ ကောင်းမယ်..၊ အခုကောင်းအောင်နေလို့ ထေရ၀ါဒက ညွန်ပြထားတာ …။
နောက်ပြီး ပြောထားတာက —၂၀၀၇ တုန်းက ဘုန်းဘုန်းတွေ တဘုန်းဘုန်း လဲပြီးကတည်းက ငရဲကို သံသယဖြစ်မိတယ် .. ပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်း တွေကိုသတ်တိုင်း ငရဲချက်ချင်းမကျဘူး၊ မြေမမြိုဘူးဆိုတာ မျက်စိနဲ့တပ်အပ်တွေ့လိုက်ရတယ် ..—
ညှစ်ခါစ နွားနို့က ချက်ချင်း မချဉ် ဘူးဗျ …။ ချိုနေဦးမှာပဲ .. ။ တရက်ကျော်လောက် စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးလေ .. ချဉ် မချဉ် ဆိုတာ ..။
—– သေပြီးနောင်ဘ၀ ဆိုတဲ့ဖဲချပ်က သိပ်မသေချာလှဘူး လို့ထင်တယ် —-
အခုကောင်းရင် နောင်ကောင်းမယ် .. အခုမကောင်းရင် နောင်မကောင်းဘူး ဆိုတာထက် သေချာတာ ဘာရှိသေးလဲ ..။ အခုဘ၀မှာ ကောင်းမကောင်း ဆိုတာက နောင် တမလွန်မှာ ကောင်းမကောင်းဆိုတာကို သေသေချာချာကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ် ..။
—ယနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မှားရင်မှားကြောင်း၊ မှန်ရင်မှန်ကြောင်း Proof လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား
ထင်မိပါတယ်.. ။ ၁ နဲ့ ၁ ပေါင်းရင် ၂ ရတယ်ဆိုတာလောက် သေချာနေတာကို ဘယ်လို မှန်ကန်အောင် သက်သေထပ်ပြရမလဲ ..။ ထပ်စမ်းချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့် Passing By ကိုယ်တိုင် ဘုန်းဘုန်း တပါးပါးကိုသတ်ကြည့်ဖို့လိုမယ် ဖြစ်ပါကြောင်း ….။
အခုမှ ဝင်ရောက်အားပေးနေတယ် ကိုမိုဘိုင်းကလဲ။ ဒီဆောင်းပါးကဖြင့် ကြာလှပြီ။ ကျနော် သိသလောက် မိုးပြာဆရာ အများစုက ဆောင်းပါးတွေကို တာဝန်ခံပြီး မရေးတတ်ဘူးဗျ။ ပထမဆုံး လုပ်တတ်တာက မည်သူ၏ ဖေ့ဘုတ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရေးမဟုတ်ပါ ဆိုပြီး စရေးတတ်တယ်။ ကူးရေးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီး အဲဒီ ကူးထားတဲ့ဟာကို ကြိုက်သလား မကြိုက်သလား ယုံသလား မယုံဘူးလား မေးရင် ဘာမှကို ပြန်မဖြေတော့ဘူး။ အာစေး အထည့်ခံရသလိုပဲ။
သနားတော့ သနားပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ရေး အနေနဲ့ ရေးရင်လည်း မိုးပြာဆိုက်ဒ်တွေ လင့်ခ်တွေ လေ့လာကြပါဆိုပြီး ပေးတတ်တယ်။ အဲဒါဆို ခင်ဗျားရော ဒီဝါဒနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြင်ဘယ်လို ရှိသလဲ ဆိုပြီးမေးရင် ဒီဝါဒအောက်တော့ အရောက်မခံပါဘူးလို့ ပြောတတ်တယ်။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားလဲ သူ့ကို ဘာမှမေးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ လည်တာ လည်တာ။
အဲဒီထက် ပိုလည်တဲ့လူက ကျုပ်မိုးပြာတပည့်ဗျလို့ ပြောပြီး ဝင်လာတတ်တယ်။ ရဲရင့်တဲ့ ပုံမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက သူကိုယ်တိုင် ဘာမှရေးမထားဘူး။ သူများပို့စ်ကို လာပြီး ဆောင်းပါးရှင်က ဒီလို ဆိုတာလားလို့?။ ဆောင်းပါးရှင်က ဟိုလို ဆိုတာလားလို့ ?။ ဆိုပြီး ကွက်ရှင်မတ် ကလေးတွေ ထုတ်ပြီး မေးတတ်တယ်။ သူဘာမှ တာဝန်ယူစရာ မလိုတော့ဘူးလေဗျာ။
တကယ်တော့ ကျနော် အပြင်မှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ထဲက ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူနိုင်ဘူး ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ကိုယ်မတည်ဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေ့ရင် မင်း ဒီပုံနဲ့ဆို မိုးပြာဆရာတော် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အားပေးတတ်တယ်ဗျ။ အခြေခံ ကျင့်ဝတ် တူနေတာကိုး ဟီး ဟီး။